Lahatsoratra nataon'i Jeff Kerr ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jeff Kerr
Jeff no CEO sy mpiara-manorina an'i CaseFleet. CaseFleet dia rindrambaiko fitantanana tranga iray izay manome fahefana ireo litigatera handresy bebe kokoa, miaraka amin'ny fitaovana ho an'ny fananganana fe-potoana, alimanaka ara-dalàna, faktiora ary maro hafa.
Ahoana ny fomba hihazonana ireo mpampiasa anao ho falifaly rehefa mamoaka fanavaozana lehibe amin'ny fampiharana anao
Asabotsy, Jona 10, 2017 Jeff Kerr
Misy fihenjanana voajanahary amin'ny fampandrosoana ny vokatra eo amin'ny fanatsarana sy ny fitoniana. Amin'ny lafiny iray, manantena ny fisian'ny fampiasa vaovao, fampiasa ary angamba fijery vaovao aza ny mpampiasa; Etsy ankilany, ny fiovana dia mety hiverina rehefa very tampoka ny interface mahazatra mahazatra. Io fihenjanana io no lehibe indrindra rehefa ovaina amin'ny fomba mahavariana ny vokatra - hany ka azo antsoina hoe vokatra vaovao mihitsy. Tao amin'ny CaseFleet dia nianatra ny sasany tamin'ireo lesona ireo tamin'ny fomba sarotra isika, na dia izany aza